နှိုင်းယှဉ်လျှင် SSD hard drive - စမ်းသပ်မှုတွင်အကောင်းဆုံး SSD hard drive ၅ ခု
နေအိမ်/အကြံပေးသူ/SSD hard drive စမ်းသပ်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံး SSD hard drive 5TB ၅ ခု
SSD hard drive စမ်းသပ်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံး SSD hard drive 5TB ၅ ခု
Vangelis18 ။ ဇန်နဝါရီလ 2020
ssd hard drive စမ်းသပ်ခြင်း
SSD hard drive တစ်ခုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေနိုင်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းစတက်လာပြီး Windows နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်သလား။ သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များစတင်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည်ကြာရှည်လွန်းပါသလား။ ထို့နောက်သင် SSD hard drive တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဒါတွေဟာသမားရိုးကျ HDD hard drive တွေထက်အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။ ယနေ့စျေးကွက်တွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသောထုတ်လုပ်သူများစွာရှိသည်။ သို့သော်မှန်ကန်သော disk ကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ5TB ပါသောအကောင်းဆုံး SSD hard drive ၅ ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးနေပြီးသင်ပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် သင်ပြုလုပ်ပုံကိုရိုးရှင်းစေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ ဒေတာကူးပြောင်းမှုအမြန်ပြန်ရရန်။
Samsung MZ-76E1T0B / EU 860 EVO 1 TB SATA 2,5 "Internal SSD အနက်ရောင်
SanDisk SSD Plus အတွင်းပိုင်း hard drive 1 TB (burst mode တွင်ရေးသားမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်နိုင်၊ ပိတ်ခြင်းနှင့်တင်ခြင်း၊ ဖတ်နှုန်း ၅၃၅ MB / s၊ အမြန်နှုန်း ၄၅၀ MB / s၊ ချောက်ခြားနိုင်သော)
WD Blue SATA SSD 1 TB၊ ၂.၅ လက်မ (အတွင်းပိုင်း SSD၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားသည်၊ 2,5 MB / s အထိဖတ်သည်၊ 560 MB / s အထိ၊ shockproof နှင့် WD FIT Lab-certified ရရှိသည်)
Intenso 3812460 Internal SSD ဟာ့ဒ်ဒရိုက် 1TB ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်
အရေးကြီးသော BX500 CT1000BX500SSD (Z) 1TB အတွင်းပိုင်း SSD (3D NAND၊ SATA၊ 2,5 လက်မ)
X ကိုက x70,7 10 စင်တီမီတာ
X ကိုက x 0,7 10,17စင်တီမီတာ
X ကိုက x 1070,7 စင်တီမီတာ
X ကိုက x 10 0,77စင်တီမီတာ
1 တစ်ချက်မှာအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး SSD hard drive ၅ ခု
2 နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံး SSD hard drive ၅ ခု
5 3. Western Digital WDS100T2B0A WD အပြာရောင်
6 4. Intenso internal SSD hard drive 1TB TOP စွမ်းဆောင်ရည်
7 ၅။ အရေးကြီးသော BX5 CT500BX1000SSD500 (Z) 1 TB
9 SSD hard drive ဆိုတာဘာလဲ။
10 SSD hard drive ၏အားသာချက်များ
11 SSD hard drive များမည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
12 SSD hard drive အမျိုးမျိုး၏ပုံစံများရှိပါသလား။
13 ပြင်ပ SSD hard drive
14 ssd hard drive တစ်လုံး ၀ ယ်တဲ့အခါဘာတွေထည့်စဉ်းစားသင့်လဲ။
15 အကောင်းအဆိုး cons
တစ်ချက်မှာအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး SSD hard drive ၅ ခု
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင်သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သည် အကောင်းဆုံး 5TB SSD အတွင်းပိုင်း hard drive ၅ ခု လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ၀ ယ်သည့်အခါသင်ဂရုပြုသင့်သောအရာတို့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးအသိပေးပါ။
မြန်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း ၎င်းအတွက်အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် SSD hard drive၊ အထူးသဖြင့် shock resistance ပေါ့။ သင့်လက်ပ်တော့ ပြုတ်ကျပါက ပျက်စီးနိုင်ခြေ နည်းပါးပြီး သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ hard disk နဂိုအတိုင်းနေဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်။ အဆိုပါ သမားရိုးကျ HDD disk များ ဤအရာကိုအလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ထိုအတောအတွင်းတွင် hard drive များသည်အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုးတက်လာသည်။ ဒါကြောင့်ဒါခေါ်တာ M.2 SSD hard drive များ အလွန်တိုးတက်လာသည်။ နည်းပညာအသစ်သည်သူတို့ကိုပိုမိုလျင်မြန်စေပြီးလက်ရှိစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူသူတို့သည်ပုံမှန် HDD နှင့်တစ်နေ့အစားထိုးလိမ့်မည်မှာသေချာသည် SDD hard drive များ တွန်းဖယ်။
နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံး SSD hard drive ၅ ခု
Solid State Drive (SSD) သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်အတွက် HDD (hard disk) နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
ပိုမြန်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့ပိုပြီးပါဝါ: 3,6 ကြိမ်အထိပိုမြန်နေတဲ့ HDD ထက် (550 MB / s, 520 MB / s ရေးအမြန်နှုန်းကိုဖတ်)
-21,10 EUR 129,99 EUR
ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှုတွင်ပထမဆုံး SSD hard drive သည်၎င်းမှဖြစ်သည် Samsung MZ-76E1T0B / EU 860 EVO SSD hard drive သည် Windows နှင့် Linux အတွက်ဖြစ်သည် မရ။ 1TB hard drive တွင်ရှိသည် စာဖတ်နှုန်းမြန်နှုန်း ၏ 550 MB / s နှင့်က အမြန်နှုန်း 520 MB / sမရ။ ကွန်ပျူတာတွင်အမြန်အလုပ်လုပ်ရန်အထူးသင့်တော်သည်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုနှင့် ၃.၅ အတွင်း Samsung SSD သည် desktop PC များနှင့် notebook အများစုနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ထုတ်လုပ်သူကနောက်ထပ်တစ်ခုပေးသည် 500GB, 1000GB, 2000GB နှင့် 4000GB ဗားရှင်း ပေါ်မှာ။
၂.၅ လက်မ SATA 2.5 GB / s
Samsung 3core MJX
လည်ပတ်အပူချိန်:0- 70 ° C
ပုံစံအချက်: M.2 2280
အလေးချိန်: 50 ဂရမ်
535 MB / s အထိဖတ်နိုင်သည့်အမြန်နှုန်းဖတ်နိုင်ခြင်းနှင့် 450 MB / s အထိမြန်နှုန်းရေးခြင်းသည်သင်၏ PC စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ Internal hard drive သည်အခြား hard drive များထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
သင်၏နှေးနှေးကွန်ပျူတာဟောင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ SSD hard drive သည်သင်၏ PC ကိုသက်တမ်းပိုရှည်စေပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။
ဒုတိယ hard drive သည် SanDisk မှလာသည်။ ပု 1 TB အကြီး အဆိုပါစံချိန်သည်ယူရို ၈၅ ၀ န်းကျင်ဖြစ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်မှုမော်ဒယ်များထက်အနည်းငယ်စျေးသက်သာသည်။ SanDisk SSD hard drive ကိုထုတ်လုပ်သူလည်းရှိသည် 120GB, 240GB, 480GB, 1TB နှင့် 2TB စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပု ဖတ်နှုန်း 535 MB / s နှင့် အမြန်နှုန်း 450 MB / s သမားရိုးကျ hard drive များထက် data processing ပိုမြန်သည်။ ၂.၅ လက်မအရွယ်အစားနှင့်၎င်းသည်ပြဿနာမဖြစ်သင့်ပါ SanDisk hard drive မည်သည့်မှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ် desktop PC တွင်မဆိုထည့်သွင်းရန်
သမားရိုးကျ hard drive များထက်အဆ ၂၀ ပိုမြန်သည်
Shock resistance သည်သက်သေခိုင်ခံ့မှုကိုအာမခံသည်
လည်ပတ်အပူချိန်: 0ºC - 70ºC
ပုံစံအချက်: ၆.၃၅ စင်တီမီတာ (၂.၅ လက်မ)
3. Western Digital WDS100T2B0A WD အပြာရောင်
SSD hard drive သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်နေသော MTTF နာရီ ၁.၇၅ သန်းနှင့်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် TBW ၄၀၀ အထိပေးသည်
SATA SSD ဖြင့်သင်၌ shockproof နှင့် WD FIT LAB အသိအမှတ်ပြု internal hard drive များစွာကိုကွန်ပျူတာမျိုးစုံနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သေဆုံး Western Digital WDS100T2B0A WD အပြာရောင် ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှုတွင်တတိယ SSD hard drive ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် 250, 500, 1000 နှင့် 2000 GB ကဲ့သို့ကွဲပြားသောဗားရှင်းများနှင့်အရွယ်အစားများကိုပေးသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော SLC (Single Level Cell) caching နည်းပညာကြောင့် SSD သည်aဖန်တီးပေးသည် စာဖတ်နှုန်းမြန်နှုန်း ၏ 560 MB / s နှင့်က အရေးအသားအမြန်နှုန်း ၏ 530 MB / sမရ။ ထို့ကြောင့်ဒေတာများကဲ့သို့ ခ။ နိ ဗီဒီယို-မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပဲ Processing Processing ကိုအကောင်အထည်ဖော်တယ်။
ဤတွင် hard drive သည်၎င်း၏အလွန်နိမ့်သောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူထင်ရှားသည်။ ထုတ်လုပ်သူ WD သည်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် disk စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများကိုလည်းပေးသည်။ အပူချိန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့ hard disk ၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးသည်။ WD Functional Integrity Testing Lab (FIT Lab) ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏ hard drive အတွက်ရှည်လျားသောသက်တမ်းကိုအာမခံသည်။
အလေးချိန်: ၅၀ ဂရမ်
4. Intenso internal SSD hard drive 1TB TOP စွမ်းဆောင်ရည်
Sequential read: 520MB / s အထိ - Sequential write: 500MB / s အထိ
6 Gbps ရှိသော SATA III interface သည်ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် netbook များကိုစက္ကန့် ၂၀ အတွင်းစတင်စေနိုင်သည်
-3,00 EUR 76,90 EUR
အဲဒီလိုပဲ SSD hard drive ပါ Intenso မှ 128GB, 256GB, 512GB & 1TB တို့ကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤ SSD သည် SATA III interface ကိုကူညီသည်6GB ကို / s နဲ့ eine စာဖတ်နှုန်းမြန်နှုန်း ၏ 520 MB / s နှင့်က အရေးအသားအမြန်နှုန်း ၏ 500 MB / sမရ။ ၎င်းသည် laptop သို့မဟုတ် PC များတွင်သုံးရန်အလွန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော data balancing အတွက် SATA III interface လည်းရှိသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောကြောင့်၎င်းသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကို notebook များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
စက္ကန့် ၂၀ ထက်နည်းသောကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် netbooks များကိုစတင်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် MLC NAND flash
၅။ အရေးကြီးသော BX5 CT500BX1000SSD500 (Z) 1 TB
ပိုမိုမြန်ဆန် Boot-တက်။ ဖိုင်တွေကိုပိုမိုမြန်ဆန်တင်။ တိုးတက်လာသောစနစ်ကတုန့်ပြန်
ပုံမှန် hard drive ကိုထက် 300% ပိုမြန်
ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှု၌နောက်ဆုံး SSD hard drive သည် အရေးပါ BX500အတွင်းပိုင်း SSD 1 TB နှင့် စာဖတ်နှုန်းမြန်နှုန်း ၏ 540 MB / s နှင့် အရေးအသားအမြန်နှုန်း 500 MB / s SSD hard drive သည်ယခင် drive ထက်အဆ ၂၀ ပိုမြန်သည်။ ပုံမှန် ၂.၅ လက်မအတိုင်းအတာများကြောင့်၎င်းသည်မှတ်စုစာအုပ်နှင့် / သို့မဟုတ် PC တိုင်းနီးပါးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ Transcend သည် hard drive အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရန်အခမဲ့ software များကိုလည်းပေးသည်။ အရေးကြီးသော Acronis True Image ပါ ၀ င်သည်။
Hard drive နည်းပညာ Solid state hard drive
SSD hard drive ဆိုတာဘာလဲ။
တစ်ဦး SSD hard drive သည်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုဖြစ်သည် ရိုးရာ HDD hard drive သိုလှောင်မှုနည်းပညာ (သို့) ဒေတာစီမံဆောင်ရွက်မှုသည်မူလနှင့်မတူပါ HDD hard drive ပါ ထို့ကြောင့်သင်၏အမြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးစေသည် ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် laptop များမရ။ ၎င်းသည် Windows စတင်သောအခါစောင့်ဆိုင်းချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဒေတာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာကူးယူသည်၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတင်ပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော SSD hard drive သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
SSD hard drive ၏အားသာချက်များ
တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားနှိုင်းယှဉ်ချက် HDD နှင့် SSD hard drive ပါ အလေးအနက်ကွဲပြားမှုများကိုပြသည်။
SSD hard drive များ၏အငြင်းပွားဖွယ်အားသာချက်များမှာ၎င်းတို့သည်ပိုမြန်သည် ရေး / ဖတ်နှုန်း သမားရိုးကျ hard disk နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်သော access speed လည်းရှိသည်။ ဒါကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ် စွမ်းဆောင်ရည် သင်၏ကွန်ပျူတာရှိအပလီကေးရှင်းများတွင်ပြသသည်။ Operating system ကို Windows ကဲ့သို့သော SSD hard drive ပေါ်တွင်တပ်ဆင်လျှင် PC သို့မဟုတ် laptop ၏ startup ကိုသိသိသာသာအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
အစီအစဉ်များကိုလည်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်ခဲ့ပြီးထို့ကြောင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအားလုံးဂရပ်ဖစ်နှင့်ရင်းနှီးသည် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း ခြားနားချက်ကိုမြန်မြန်သိဖို့လိုတယ်။ ကြီးမားသောမြန်နှုန်းအားသာချက်ကြောင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများသည်ကွဲပြားသောအတိုင်းအတာတစ်ခုသို့ရောက်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအားသာချက်များအပြင်သင်၏ဒေတာလုံခြုံရေးလည်းရှိသည်။ HDD ထုတ်ကုန်ဟောင်းများနှင့်အတူဖတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချို့ယွင်းချက်များသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ သင်၏ဒေတာများမကြာခဏပျောက်ကွယ်သွားသည် (သို့) မတွေ့ရတော့ပါ။ ဒေတာများကို logic board memory memory chip လေးများတွင်သိုလှောင်ထားသောကြောင့်၎င်းသည် SSD hard drive တစ်ခုတွင်မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။ ၎င်းတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုများ (သို့) ပြုတ်ကျသည် ကွန်ပျူတာ မင်းရဲ့ဒေတာလုံခြုံရေးကိုမထိခိုက်ဘူး။ အဓိကအားသာချက်မှာအထူးသဖြင့်မှတ်စုစာအုပ်များကိုရွှေ့နေစဉ်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။
SSD hard drive ၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်။ SSD တစ်ခုသည်သမားရိုးကျစွမ်းအင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းအင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစားသုံးသည် HDD ။ SDD ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မှတ်စုစာအုပ်၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုမိနစ် ၆၀ အထိကြာရှည်စေနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
SSD ၏နိမ့်သောဆူညံသံဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအပြုသဘောဖော်ပြသင့်သည်။ HDD hard drive ဖြင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောဆူညံသံများကိုအမြဲကြားနိုင်သော်လည်း SSD သည်တိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်သည်။ ဝန်ဘယ်လောက်ပဲလေးနေပါစေသင်ဘာမှမကြားနိုင်ပါဘူး။
SSD hard drive သည်သာမန် HDD ထက်သေးငယ်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစားတစ်ခုသာရှိသည် ၃.၅ အတွင်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် ၃.၅ အတွင်း HDD ကို ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သေးငယ်ပြီးကွန်ပျူတာကိစ္စတွင်နေရာသိပ်မယူပါ။
အားသာချက်များစွာရှိသော်လည်း SDD Disk များတွင်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ ပုံမှန် HDD hard drive များထက် ၂၀% မှ ၃၀% ပိုများသည်။ SSD hard drive တစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ဤနည်းဖြစ်သည် 1 တီဘီ လောလောဆယ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 90 € -120
SSD hard drive များမည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ပြောခဲ့သလိုပါပဲကွဲပြားသည် နည်းပညာတစ်ခု SSD disk ပါ သို့ HDD hard drive အဟောင်း အလေးအနက်။ ဒေတာများကိုသံလိုက်ဓာတ် disk များနှင့်ဖတ် / ဖတ်ခေါင်းများ သုံး၍ HSS hard drive တွင်ဖတ်လျှင်ဤစက်သုံးနည်းကို SSD နှင့်မသုံးတော့ပါ။ အချက်အလက်သိုလှောင်တဲ့နည်းပညာဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါပြီ။
SSD hard drive ဖြင့်ဒေတာများကိုယခုအခါချစ်ပ်အနည်းငယ်တွင်သာသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချက်အလက်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်သည်။ ဤနည်းစနစ်နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်ပါ USB တုတ်များစမတ်ဖုန်းများ၊ memory card များနှင့် internal storage ပု SSD hard drive ပါ လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည် SATA connector ကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဒါ့အပြင်အသက်ကြီးသူတွေပါ HDD hard drive များ shock အလွန်ခံရသည်။ HDD hard drive တစ်ခုပြုတ်ကျသောအခါ၎င်းသည်အများအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ချွတ်ယွင်းသွားပြီး၎င်းဖတ်သောအခါ ဦး ခေါင်းပျက်စီးသွားသည်ဖြစ်သောကြောင့်အသုံးမပြုနိုင်တော့ပါ။ စာဖတ်ခြင်းခေါင်းကိုမမှတ်မိတော့ခြင်း (သို့) ဆူညံနေသည့်အသံကိုကြားရသောအခါချို့ယွင်းချက်ကိုချက်ချင်းသိသာစေသည်။
မျိုးဆက်သစ် hard disk များသည် SSD hard disk များသို့မဟုတ်ယခုဖြစ်သည် M.2 SSD hard drive များ ပထမဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာအပြားများကိုကွန်ပျူတာ / လက်ပ်တော့များအားယေဘူယျအားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်သုံးသည်။
၎င်းသည် desktop PC (သို့) notebook ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမခွဲခြားပါ။ လူများစွာသည်သာမန် HDD hard drive နှင့် SDD hard drive တို့ကိုတစ်ပြိုင်နက်သုံးကြသည်။ ၎င်းသည် Windows ကို SSD hard drive ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုပြီးလိုအပ်သောနောက်ထပ် hard drive နေရာကို HDD hard drive တွင်သုံးနိုင်သည်။
ဒက်စတော့ကွန်ပျူတာများနှင့်မှတ်စုစာအုပ်များတွင်သုံးနေသည့်အပြင် SSD hard drive များကိုလည်းအခြားများစွာအတွက်သုံးသည် အသုံးပြုသောကိရိယာများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် SSD ဟာ့ဒ်ဒရိုက်တစ်ခုအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်သည်။ ပြင်ပ hard drive အသုံးပြု. သင်သည် ဒစ်ကို USB နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေတာများကို အလွယ်တကူ ရွှေ့နိုင်/ သို့မဟုတ် ကူးယူနိုင်သည်။
SSD hard drive များစွာဖြင့်အလိုရှိသည် ဂိမ်းစက်ပစ္စည်းများ မင်္ဂလာပါ Xbox One မှာ သို့မဟုတ် Playstation4SSD ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ဂိမ်းကစားသူများသည် HDD hard drive ကစားသမားများထက်ကြီးမားသောအမြန်နှုန်းအားသာချက်ကိုတွေ့ရသည်။
ကွဲပြားတာတွေရှိတယ် SSD hard drive တစ်ချောင်းလား။
SSD hard drive များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အဆက်မပြတ်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။ အောက်ပါပုံစံများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
၂.၅ လက်မ SSD hard drive များ
SLC SSD hard drive များ
MLC SSD hard drive များ
ပြင်ပ SSD hard drive
သင်လည်းသုံးနိုင်သည် USB ကြိုး အပြင်ပိုင်းကိုသုံးပါ။ ၎င်းတို့ကိုပုံမှန် hard drive များအဖြစ်သုံးသည်။
ပြင်ပ hard drive တစ်ခု၏အားသာချက်မှာသင်အမြဲသင်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားအချက်အလက်များဖြစ်စေမခွဲခြားပါ။ အပြင်ဘက် SSD hard drive သည်သင်ရှိနေသေးကြောင်းဤတွင်ဖော်ပြသင့်သည် မြန်နှုန်း eသူမနှင့်အတူရှိနေလျှင်လက်လှမ်းမှီနိုင်သည် USB က 3.0 ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် USB 2.0 နှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်၎င်းတို့သည်နှေးကွေးသွားပြီးမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်။ SSD hard drive ကို defragmented မလုပ်သင့်ပါ။ ပုံမှန် HDD disk တစ်ခုအား access time ကိုတိုစေရန်အတွက်အချို့သောကြားကာလများတွင် defragmented လုပ်သင့်သည်။ SSD hard drive တစ်ခုနှင့်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
UGREEN hard drive enclosure ၂.၅ လက်မ USB C 2,5 Gen 3.1 မှ SATA III အထိ2Gbps အထိ SSD နှင့် HDD အတွက် ၉.၅ မီလီမီတာ / ၇ မီလီမီတာ UASP အထောက်အပံ့ရှိသောအမြင့်နှင့် ၉.၅ မီလီမီတာ / ၇ မီလီမီတာ UASP ပံ့ပိုးထားသော SATA အဖုံး၊ USB C6ကေဘယ်လ်ကိရိယာမပါသောစုဝေးမှု
စူပါအမြန်နှုန်း- 3.1Gbps အထိ အားကောင်းသည့် USB C2Gen6အပေါက်ကြောင့် 2.5 လက်မ SATA ဟာ့ဒ်ဒရိုက် အိမ်ရာသည် UASP ပရိုတိုကောကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး UASP စွမ်းရည်ရှိသော host controller နှင့် တွဲပေးသောအခါတွင် ပုံမှန်ထက် 70% မြန်နှုန်းအထိ ပေးစွမ်းနိုင်သည် USB 3.0
ပြီးပြည့်စုံသော လိုက်ဖက်ညီမှု- ပြင်ပအိမ်ရာသည် အမြင့် 2,5 မီလီမီတာနှင့် 9,5 မီလီမီတာရှိ7လက်မ SATA SSD/HDD ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များကို USB သို့မဟုတ် USB C/Thunderbolt3စက်ပစ္စည်းအများစုတွင် တီဗီများ၊ routers၊ PS5/4၊ Xbox၊ MacBook၊ MacBook Pro ကဲ့သို့သော၊ iMac၊ လက်ပ်တော့၊ PC နှင့် 6TB အထိ ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Plug & Play၊ Windows XP / 7/8/10/11၊ Linus၊ Mac OS 8.0 နှင့် အထက်အောက်ရှိ Marc ထည့်သွင်းခြင်း မရှိပါ။
-3,00 EUR 16,99 EUR
ssd hard drive တစ်လုံး ၀ ယ်တဲ့အခါဘာတွေထည့်စဉ်းစားသင့်လဲ။
ကြိုပြောထားသည့်အတိုင်းစျေးကွက်တွင်အမျိုးမျိုးသော hard drive ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ထုတ်လုပ်သူများစွာရှိသည်။ အရာများကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူသည်။ မှန်ကန်သော hard drive ကဘာလဲ။ ၀ ယ်တဲ့အခါဘာကိုသတိထားသင့်လဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်နှင့် ၀ ယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည်အကြောင်းအချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်လွှမ်းမိုးသည်။
မြန်နှုန်းသည်အဓိကအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်ပါကဤအချက်ကိုအသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည်ကြီးမားသောအမြန်နှုန်းကိုကတိပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒေတာအားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသောထုတ်လုပ်သူများရှိပါသည်။ 3000 MB / s တစ်စက္ကန့်လျှင်အောင်မြင်နိုင်သည်။ ဤတန်ဖိုးများကိုရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်းမှန်ကန်သောညှိနှိုင်းထားသော hardware များဖြင့်ဤကိန်းဂဏန်းများပေါ်တွင်သင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
SSD hard drive ကိုအကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းရရှိစေရန်အတွက် SATA3သို့မဟုတ် PCI-Express ပြီးစီးရမည်။
Hard drive တစ်လုံး ၀ ယ်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက် ယခုထုတ်လုပ်သူအားလုံးသည်ကွဲပြားသောသိုလှောင်မှုနေရာအရွယ်အစားကိုပေးသည်။ အစပိုင်းမှာ 32 GB, ထို့နောက် 128 GB, 256 GB, 500 GB နှင့်ယခု 1-4 terabytes သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းသည် memory အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။ သိုလှောင်ရန်နေရာပိုလိုချင်လေစျေးပိုများလေဖြစ်သည်။ သင်ပေးဆပ်လိုသောအရာသည်သင်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအမြဲသတိပြုသင့်သည် Hard drive နည်းပညာ အမြဲတိုးတက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လောလောဆယ်တစ်ခုရှိတယ် Terabyte hard drive ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်၍ ၁၀၀ ပေါင်ဝန်းကျင်
သာမန် HDD hard drive များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်မြန်သည်
ရှည်လျားသော - အလုပ်လုပ်ပမာဏနှင့်အတူအများဆုံးရေးသားစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် TurboWrite ကြားခံ
Sequential read: 520MB / s အထိ - Sequential write: 500MB / s အထိ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ Shock-resistant, noiseless operation (0dB)၊
သာမန် hard drive ထက် ၃၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမြန်သည်။ Micron 300D NAND - မှတ်ဉာဏ်လောကတွင်နှစ်ပေါင်း ၄၀ တိုးတက်မှု
ဗီဒီယို loading အားဖြင့်သင်တို့ကို YouTube ကို၏ privacy ကိုမူဝါဒကသဘောတူသည်။
အမြဲ YouTube ကိုဖွင့်ရန်
အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားခြင်း - မကောင်းသောသုံးသပ်ချက်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သနည်း
Smart Home ဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် နံရံလေးခုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပါ။
software development ၏အခြေခံ
RMM နှင့် MSP ဖြင့် မြင့်မားသော IT လုံခြုံရေး
IT ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရှိသင့်သောလက္ခဏာများ
Windows နှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုသင်မည်သို့ ၀ ယ်သနည်း။
Hybrid Router နှင့် Telekom MagentaZuhause M